प्रदेश सभामा मेरो भूमिका प्रतिपक्षको नेतृत्वः डिल्ली चौधरी – RaptiSandesh
कांग्रेस दाङका सचिव डाँगीले भने– ‘सस्तोमा औषधी विक्री गर्यो भनेर बन्द गर्ने कस्तो सरकारी व्यवस्था हो ?’
कमीसनका कारण रेम्डीसिभिर औषधी रोकीयो की ?’– संविधान सभा सदस्य खनाल
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाको प्रश्न– ‘कोभिडका विरामीलाई आवश्यक औषधी विक्रीमा रोक किन ?’
Home / Feature Breaking news / प्रदेश सभामा मेरो भूमिका प्रतिपक्षको नेतृत्वः डिल्ली चौधरी
प्रदेश सभामा मेरो भूमिका प्रतिपक्षको नेतृत्वः डिल्ली चौधरी
डिल्ली चौधरी – प्रदेशसभा सदस्य दाङ क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (१)
यहाँको जीत के का लागि ?
मैले मेरो जीतलाई प्रदेश नम्बर पाँचका सम्पूर्ण नागरिकको जीतका रुपमा लिएको छु । यसर्थ यो मेरो व्यक्तिगत जीत हैन । प्रदेशसभा सदस्यका निर्वाचित भैसकेपछि अब मेरो मुख्य लक्ष भनेको यो प्रदेशको समृद्धि हो । कसरी यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फनै मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ । मैले दाङबाट निर्वाचन लडे र जीते । तर मेरो ध्यान दाङमा मात्रै सिमित पक्कै हुनेछैन । दाङ सहित यो प्रदेशको समुन्नती,बिकास र समृद्धिका लागि अबको मेरो लडाई हुने छ ।
समृद्ध प्रदेशका लागि मानसिक रुपमा केहि खाका तयार भएको छ ?
हे, यहाँले भनेजस्तै पाँच नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि, अँझ भनौ नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेश निर्माणका लागि मैले आधारभुत कुराहरुबाटै आँफूलाई मानसिक रुपमा तयार पारेको छु । जस्तै सडक मेरो मुख्य प्राथमिकतामा छ । अहिले पनि हेर्नुस् यो प्रदेशका दाङ सहित थुप्रै जिल्लाहरुमा सडकबाटोको चरम सास्ती छ । घण्टौँ पैदल हिँडेर जीवन व्यथित गर्नुपरिरहेको अवस्था यहाँ छ ।
यसर्थ सडक सञ्जाल मेरो प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । यसैगरि पानी मेरो दोस्रो प्रमुखताको बिषय हो । पिउने पानी होओस् या सिँचाईका लागि होओस् । हाम्रो प्रदेशमा पानीको समस्या बिकराल छ । यो समस्यालाई चिर्नु मेरो अर्को जिम्मेवारी रहने छ । यसैगरि स्वास्थय क्षेत्रको बिकास मेरो अर्को लक्ष हो । अहिले पनि दाङकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भरपर्दो उपचार नपाएर बिरामीहरु बाहिर रेफर हुनुपर्ने अवस्था लामो समय देखि निम्तदै आएको छ । यो समस्यालाई हल गरेर नागरिकलाई भरपर्दो उपचार सेवा दिलाउनु मेरो अर्को लक्ष रहने छ ।
दाङमा अवरुद्ध बिमानस्थललाई नियमीत गर्नु मेरो अर्को लक्ष हो । यो बिमानस्थलबाट हवाई सेवा सन्चालन गरेर यहाँका नागरिकहरुलाई उडान सेवा दिलाउन मैले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यि लगाएत शिक्षा,रोजगार लगाएत नागरिकका दैनिक जीवनयापनसंग जोडिएका बिषयहरुलाई मैले एकदमै महत्वका साथ हेर्नेछु र काम गर्ने छु । र मलाई लाग्छ, समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सबै भन्दा पहिला आधारभुत आवश्यक्ताको परिपूर्ति मुख्य कुरा हो र म त्यहिँबाटै आफ्नो मिशनलाई सुरुवात गर्ने छु ।
बामगठवन्धन हाबी भैरहेका बेला आँफूलाई कत्तिको चुनौती देख्नु भा छ ?
मेरो अगाडी चुनौतीको ठूलो पहाड छ । तर म त्यो चुनौतीको पहाडलाई फोडेर बाटो निर्माण गर्न सक्नु भन्ने दृढ विश्वासमा छु । किनकी म बिकासका लागि कहिल्यै कसैसंष्ग झुकेन ,सम्झौता गरेन । मेरो त्यहि अडान र साहसले आज मलाई प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा मतदाताहरुले पुर्याउनु भएको हो । यसर्थ म चुनौती देखि डराउँदैन ।
चुनौतीलाई सामना गरेर बिकास गर्ने लक्षमा म जहिल्यै सफल हुने छु । म नाजायज काम गर्दैन । तर जायज काममा बहुमतका नाउमा कसैले अवरोध गर्न खोज्यो भने मैले त्यो अवरोधलाई छिचोल्न सहजै सक्छु । समग्रमा म यो प्रदेशको हितका निम्ती जतिसुकै चुनौती आईपरेपनि बिश्राम लिने छैन ।
दाङमा कांग्रेसबाट तपाईको एक्लो जीत कसरी सम्भव भयो ?
मतदाता प्रतिको विश्वास, उहाँहरु प्रति मैले गरेको योगदानको कदर अहिले भएको हो । म दाङको बिकास निर्माण होओस् वा दैवी विपत्तिमा सदैव यहाँका नागरिकहरुसंग संगै रहेँ । तपाईलाई भन्नु पर्दा सामान्य कुलो निर्माण,नाला निर्माणमा म उभिएँ । बाढीले नित्याएको विपत्तिमा म पीडितहरुसंगै उभिएँ र उहाँहरुलाई राहत दिलाउनका लागि रातदिन खटिएँ ।
यतिमात्रै हैन, अहिले मेरो पहलमा दर्जन बढि पुलहरु निर्माण भैरहेका छन्, यसर्थ पुन निर्माणमा पनि म उभिएँ । मेरो यो पहल, प्रयास र सकृयतालाइ यहाँका मतदाताहरुले प्रत्यक्ष देख्नु भयो । मेरो यो भुमिकाले उहाँहरुमा डिल्ली चौधरी बिकास प्रेमी नेता हो भन्ने भावनाको बिकास भयो । त्यहि बिकसीत सकारात्मक सोँचले आज मेरो जीत सम्भव भएको हो ।
यसर्थ मतदाताहरु बिकास चाहनुहुन्छ । हरेक निर्वाचनसंग मतदाताको अपेक्षा भनेको बिकासनै जोडिएको हुन्छ । मैले दाङका लागि गरेको बिकास निर्माणको प्रभावले मतदाताहरु म प्रति सकारात्मक हुनु भयो ।
सबै उम्मेदवार पछि परिरहँदा आँफूलाई पनि डर लागेन ?
म मतगणनना भैरहँदा कुनैबेला पनि विचलीत भएन । मैले चुनावी अभियानकै क्रममा धेरै फराकिलो मतान्तरको आँकलन गरेको थिएँ । बरु नतिजा आउँदा किन यति कम मत आयो भनेर मन खिन्न भयो । मलाई पुरा विश्वास थियो मेरो योगदानको मुल्यांकन मतदाताहरुले पक्कै गर्नेछन् र गर्छन् भन्ने । यसर्थ म जीतको मानसिकता बनाएर बसिसकेको थिएँ । अरु साथीहरुको मत परिणामले मेरो यो मानसिकतालाई कत्तिपनि विचलीत बनाएन ।
तपाईले आँफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भन्नु भएको थियो, अब सम्भव छ यो ?
हो, मैले चुनावी अभियानका क्रममा आँफूलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा उभ्याएको थिएँ । तर प्रदेशभरको चुनावी मत परिणामले कांग्रेसलाई निकै कमजोर तुल्याईदियो, बामगठवन्धन बलियो बनेर आईदियो । यसर्थ अब मेरो मुख्यमन्त्रीको एक्लो योजना बिफल भईदिएको छ ।
यसर्थ अब मेरो भुमिका भनेको प्रतिपक्षको नेतृत्वकर्ताको रहने छ । प्रदेशसभामा सशक्त प्रतिपक्षको नेतृत्व लिएर प्रदेश नम्बर पाँचको समृद्धिको अभियानमा खट्ने छु । सत्तापक्षियहरुले गर्ने सही र गलतको निगरानी गरेर सहिको समर्थन र गलतको बिरोध गरेर प्रदेशको हितका लागि मुख्य जिम्मेवार बन्ने छु ।
बिपक्षिहरुसंगको सहकार्य तपाई एक्लैलाई गाह्रो पर्ला त ?
निर्वाचन हार र जीतको प्रकृया हो । यसमा एकले जीत्दा अर्कोले हार्नै पर्छ । र निर्वाचनले दिने नतिजालाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ । तर चुनावले दिने नतिजालाई लिएर आँफू भित्र बैमनश्य र उन्माद जन्माईनु हुन्न, म यो सोँच राख्छु । हिँजो हामी निर्वाचनको प्रकृयामा सहभागी भएका थियौँ । तर अब निर्वाचनको परिणामले कसैलाई ठूलो र कसैलाई सानो भनेर हेरिनु हुन्न । प्रदेशसभामा सहभागी हुने सबै सदस्यहरुको भुमिका र हैसियत अब सबैको एउटै हुन्छ ।
यसर्थ गठवन्धन वा ठूलो दलको रुपमा आँफूलाई महान र अर्कालाई सानो देख्ने गलत मानसिकता रहनु हुन्न । मेरो भुमिका पनि अब त्यहिनै हो,प्रदेशसभामा सहभागी हुने सबै सदस्यहरुलाई समान व्यवहार र सम्मान म बाट कहिँकतै कमी हुने छैन । सबैसंगको मित्रवत व्यवहार गरेर प्रदेशको हितका निम्ती अघि बढ्ने छु । र मलाई आशा छ सबैले यसै गर्नुहुने छ ।
सबै भन्दा पहिला त मेरा मतदाताहरु प्रति आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु । जसको अमुल्य मतले मलाई प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित गराईदिनु भयो । यसैगरि मेरो पार्टी नेतृत्व जसले मेरो चुनावी यात्रालाई सफल तुल्याईदियो ।
मेरा पार्टीका साथीहरु, शुभेच्छुक, समर्थकहरु प्रति निकै आभारी छु । र मैले के भन्छु भने म हिँजो पनि बिकास निर्माणको चिन्तनमा डुब्दै आएको र बिकासमा योगदान दिएको व्यक्ति हुँ । र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर मेरो त्यो भुमिकालाई अँझ सशक्त बनाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । म यो जिम्मेवारीबाट विचलीत नभई प्रदेशको समग्र बिकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रण गर्दछु ।
म हिँजो पनि सर्वसाधारण नागरिकसंग सुखमा हाओस् वा दुखमा संगै थिए, आज पनि संगै छु र यो सहयात्रा सदैव टिकाईरहने छु ।
२५ मंसिर २०७४, सोमबार १३:४९
Previous: फुर्सेखालीमा भेटिएको बम नेपाली सेनाद्धारा निष्कृय
Next: राप्तीका एक्ला कांग्रेसी ‘हिरो’
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १४:०९
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १३:३६
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १३:१३
कोभिड विरामीकालागी आवश्यक रेम्डीसिभिर औषधी विक्रीमा रोक
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १२:५६
दाङमा ३ सय संक्रमीत डिस्चार्ज
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १२:११